Villa Soomaaliya Oo Abaabuleysa Banaanbax Berri Ka dhaco Gudaha Muqdisho | SMC
Home WARARKA MAANTA Villa Soomaaliya Oo Abaabuleysa Banaanbax Berri Ka dhaco Gudaha Muqdisho
Sida aan xogaha ku helnay Banaanbax ayaa laga abaabulayaa Gudaha Muqdisho,kaas oo lagu wado in berri Oo khamiis ah dhaco.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa lacag ku bixisey sida la sheegay Dibad baxa,waxaana lasoo tebinayaa in Lagu taageerayo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Ilo ka ag dhaw Xafiiska Madaxweynaha Dalka ayaa inoo xaqiijiyey arintaan si gaar ah waxa dibad baxa loogu xilsaaray inay qaban qaabiyaan,Xasan Cabdullaahi Maxamed oo La dhashay Madaxweynaha iyo shakhiyaad la shaqeyn doono.
Dib udoorashada Madaxweynaha Qaranka ayaa dedaal badan loo galayaa,iyadoo hardan adag ay Villa Soomaaliya kala kulmeyso Murashaxiinta Mucaaradka ah Ee 14 isbaheystay ah.
Legdanka socda kasokoow Madaxweyne Farmaajo ayaa helaya Gurmad Siyaasadeed,isagoo Dawlada Qatar iyo Itoobiya ay ballan qaadeen inay laba jibaarayaan Hamigiisa inay ka dhabeeyaan.
Sidaas oo kale waxaa jirta Qorsheyaal lagu kala fur furayo Murashaxiinta Midoobay Ee Dawlada kasoo horjeeda kuwaas oo kusugan Hadda Xamar.
Siyaasada oo ah mid aan saaxiib joogto ah laheyn ayaa laga yaabaa in labo xalay heshiiyey Subixii kala irdhoobaan,sidaas ay tahayna Madaxweyne Farmaajo,Mahdi Guuleed,Dalxa & Taliye Fahad Yaasiin ayaa wadajir waxay udoonayaan in Nabad iyo Nolol dib usoo laabato.
Previous articleXOG: Cali Guudlaawe oo maalintii 3-aad ka baaqday safar uu ku tegi lahaa Baladweyne
Next articleDhageyso Odayaasha Dhaqanka KG Oo Maalinkii Labaad Ka doodaya Sida loo Xalin Karo Khilaafaadka Bulshada ka dhax dhaca.